होमियोप्याथिक चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. रबिन्द्रमार राय, ०५३ बमोजिम छुट्टै काउन्सिल गठनको माग | Birat Khabar
हाेमपेज > समाचार > होमियोप्याथिक चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. रबिन्द्रमार राय, ०५३ बमोजिम छुट्टै काउन्सिल गठनको माग
होमियोप्याथिक चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. रबिन्द्रमार राय, ०५३ बमोजिम छुट्टै काउन्सिल गठनको माग
अबिजाल बिष्ट ७ चैत्र २०७३, सोमबार March 23, 2017 समाचार, समाज	0
नेपाल होमियोप्याथिक चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. रबिन्द्रमार राय निर्वाचित भएका छन् ।
बिराटनगरमा भएको संघको पाँचौ अधिवेशनले डा. रायलाई भारी बहुमतले निर्वाचित गरेको हो । ४३ जना सहभागि रहेको चुनावमा अध्यक्षका अर्का प्रतिष्पर्धी श्रवण यादवलाई ३५ मतको अन्तरले पराजित गरी डा. राय निर्वाचित भएका हुन । ११ जनाको केन्द्रिय कार्यसमिति चाँडै गठन गर्ने रायले बताए ।
अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएसँगै यादवले अधिकार सम्पन्न खि होमियोप्याथिक चिकित्सा काउन्सिल गठनको माग गरेका छन् । २०५३ सालको मन्त्रि परिषदले गरेको निर्णय बमोजिम बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने रायले जानकारी दिए ।
मोरङका बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा मोर्चाको तालाबन्दि
सुन प्रकरणबारे अदालतको आदेश: एसएसपी खत्री ४ दिन थुनामा